C/kariin Guuleed oo baaq u diray Madaxda Maamulka Hirshabeelle - Jowhar Somali Leader
Home Somali C/kariin Guuleed oo baaq u diray Madaxda Maamulka Hirshabeelle
C/kariin Guuleed oo baaq u diray Madaxda Maamulka Hirshabeelle
Madaxweynihii hore ee Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay khilaafka u dhaxeeyay Madaxda Maamulka Hirshabeelle ee sababay in saacadihii la soo dhaafay in magaalada Jowhar gasho xaalad kacsanaan siyaasadeed, kaddib mooshino iska soo horjeeda ay ku dhawaaqeen labada dhinac.
C/kariin Guuleed ayaa ugu baaqay Madaxda Hirshabeelle in khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay ay wada hadal ku xaliyaan, lana dejiyo xaalada.
“Waxaa muuqda maalmahan mooshino iska soo horjeeda iyo khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda sare ee dowlad gobaleedka Hirshabeelle, waxaan ku baaqayaa xaaladda in la dajiyo, waxii khilaaf iyo is afgarasho waa ah ee jirana lagu xaliyo is faham iyo wadahadal”ayuu yiri C/kariin Guuleed.
Mr Guuleed ayaa sheegay in Madaxda iyo Mas’uuliyiinta reer Hirshabeelle ay garwaaqsadaan in khilaafka horseedo burbur ku yimaada hey’adaha dowladnimada iyo jiritaanka maamulka, sidii ku dhacday lal hore Maamulkii Galmudug.
Ugu dambeyn waxaa uu ugu baaqay dowladda Federaalka inay faragelinta ka deyso Maamulka Hirshabeelle, si uu arrimihiisa u xalisto.
Wiil dhalinyaro oo saaka lagu dilay Muqdisho iyo wararkii u dambeeyay dilkiisa
Brazil oo noqday dalka 4aad ee ugu dhimashada badan cudurka Coronavirus
Banaanbaxyada loogaga soo horjeedo dilkii George Floyd oo ku sii fiday magaalooyin iyo dalal kale (Sawiro)